दश करोड बढी एन्ड्रोयड स्मार्टफोनलाई प्रभावित पार्ने चिनियाँ स्पाईवेयर, तपाईँको फोनमा पनि छ की? - Technology Khabar
» दश करोड बढी एन्ड्रोयड स्मार्टफोनलाई प्रभावित पार्ने चिनियाँ स्पाईवेयर, तपाईँको फोनमा पनि छ की?
Technology Khabar १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार
गूगलले एन्ड्रोयड अपरेटिङ्ग सिस्टमको प्राइभेसी र सेक्यूरिटीमा सुधार गर्न धेरै काम गरिरहेको छ । कम्पनीले गरेको यी प्रयासहरुका बाबजुद पनि गूगल प्ले स्टोरमा विभिन्न मालवेयर र स्पाईवेयर एप्स देखिईरहेका छन् ।
हालै आएको एक रिपोर्टअनुसार गूगल प्ले स्टोरमा भएको एक चिनियाँ एपले करोडौं मोबाइल फोनहरुलाई प्रभावित पारेको छ।
भिपिएनप्रोले गरेको अनुसन्धानअनुसार सो एपसँग सम्बन्धित डेभलपरले विकास गरेको विभिन्न एपहरुमा पनि मालवेयर देखिएको छ । सो एपमार्फत मालिसियल रिमोट एक्सेस ट्रोजन लुकाईएको छ, र यो एपले प्रयोगकर्ताको जासूसी गर्ने गरेकोछ । यो एप गूगलको एप स्टोरमा भेटिएको छ ।
चीनको हाङ्गझोउमा आधारित क्यूभिडियो इंकले तयार पारेको एपमा त्यस्तो जोखिम भेटिएको हो । कम्पनीले तयार पारेको लोकप्रिय भिडियो एडिटिङ्ग एप भीभाभीडियो प्ले स्टोरमा निशुल्क उपलब्ध रहेको छ । जून अहिलेसम्म १० करोड भन्दा बढि पटक डाउनलोड भईसकेको छ ।
अर्कोतर्फ भीभाभिडियो एपलाई अन्य ४० वटा चिनियाँ एप्सका साथमा भारतीय सरकारले भने मालवेयर र स्पाईवेयरको रुपमा वर्गीकरण गरेको थियो ।
यी एपहरु एन्ड्रोयडमा मात्र नभई एप्पलको आईओएसमा पनि उपलब्ध रहेका छन् । क्यूभिडियोका एप्लिकेसनहरु समेत एप्पल एप स्टोरमा उपलब्ध छन् । तर यसमा सिमिति अनुमति हुने हुँदा यसको दूरुपयोग कम भएको अनुमान गरिएको छ ।
यी एप्सहरुले प्रयोगकर्ताहरुसँग मोबाइल फोनमा भएको फोन नम्बरहरु, लोकसन, जीपीएस डाटाहरु माग्ने गर्दछन जून निकै संवेदनशिल डाटाहरु हुन् । त्यसैगरि क्यामरा, फोनको अवस्था, कल लग, अडियो रेकर्डको अनुमति लिने गर्दछन् । जसले यूजर्सको डाटाहरु चोर्ने र उनीहरुको जासूसी गर्ने गर्दछ ।
क्यूभिडियोका यी एपहरु जोखिमयुक्त भएको भेटिएको हो ।
भीभाभिडियो प्रो भिडियो एडिटर एचडी (VivaVideo PRO Video Editor HD)
स्लाइडप्लस- फोटो स्लाईडशो मेकर (SlidePlus – Photo Slideshow Maker)
टेम्पो- म्यूजिक भिडियो एडिटर विथ इफेक्ट्स (Tempo – Music Video Editor with Effects)
भीभाकट- प्रो भिडियो एडिटर एप (VivaCut – Pro Video Editor APP)
भीडस्ट्याटस- स्ट्याटस भिडियोज एण्ड स्ट्याटस डाउनलोडर (VidStatus – Status Videos & Status Downloader)
यदि यी एप्स तपाईँको मोबाईलमा पनि छन भने तत्काल चेक गर्नुहोस र त्यसलाई सिमित गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइल फोनबाट हुने डाटा चोरी तथा ह्याकिगबाट बच्नुहोस् ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार
अब आईफोनबाट गाडि अनलक गर्न सकिने, आईओएस १४ ‘एप्पल कार-की’ फीचर राखियो
विश्वको सबभन्दा द्रुत इन्टरनेट गति हासिल, नेटफ्लिक्सको पुरै पुस्तकालय १ सेकेन्डमै डाउनलोड हुने
इन्टरनेट ट्राफिक घटाउन यूरोपमा भिडियो कन्टेन्ट स्ट्याण्डर्ड डेफिनिएसनमा देखाईने
कलर्स प्राइड पि–५० टच बजारमा, नेपालको पहिलो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरयुक्त स्मार्टफोन
१२ पुष २०७३, मंगलवार
ट्विटरले गलत सूचना फैलिन नदिन प्रयोगकर्तासँग सहकार्य गर्दै
गुगलका कर्मचारीहरुले विश्वभर एउटै अलाएन्स बनाउने
नेपालको निर्यात व्यवसाय सम्बन्धि जानकारी दिन ‘नेपाल व्यापार सूचना पोर्टल’ सुरुवात